Egypta: andron’ny fahatezerana Zoma · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2018 3:45 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Português, 日本語, English
(Marihina fa tamin'ny 27 Janoary 2011 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Anisan'ny fitantaranay manokana ny Hetsi-panoherana tany Egypta tamin'ny taona 2011 ity lahatsoratra ity .
Feno faminaniana momba ny famerenana indray ny fihetsiketsehana nandritra ny faran'ny herinandro ny tontolon'ny Twitter Egyptiana. Nomena anarana hoe Diaben'ny Egyptiana An-tapitrisany, nahitana fihetsiketsehana mbola tsy nisy toy izany nanerana ny firenena ny andro zoma, na dia teo aza ny fampitandremana nataon'ny governemanta fa tsy ekena intsony ny fanakorontanana .
Hoy i Mohammed Rasheed nanoratra :
Hotontosaina any amin'ny faritra rehetra ny Diaben'ny Egyptiana An-tapitrisany. Andron'ny fahatezerana ny Zoma.
Nanampy i 3arabawy fa miandry fatratra ilay andro lehibe ny vahoaka avy amin'ny lafim-piainana rehetra :
Mientanentana momba ny fihetsiketsehana rahampitso ny mpivarotra ao an-tanàndehibe. Hanatevin-daharana ny 25 Janoary ireo mpiasan'ny fanasan-damba.
Nanohy i @3arabawy hoe :
Nilaza ny namana iray raha niantso fa hanao hetsi-panoherana rahampitso ny namany 2. Miasa toy ny banky mpampindram-bola izy roa ireo! Nahomby tamin'ny fanimbana ny saranga rehetra i Mubarak.
Namory ny vahoaka i Sarah Naguib:
Vitantsika ihany izany satria an'ARIVONY isika. tsy manitatra. Tsy misy dikany ny hetsi-panoherana kely. MIANGAVY anareo, rahampitso, manàna faharetana ary mivoria
sy mandefasa hafatra any amin'ny Filoha Egyptiana Hosni Mubarak, manao hoe :
Ry Filoha Hosny Mubarak … Moa ve midika fankatoavana vahoaka ny fahanginanao?
Ary i Sandmonkey efa vonona :
Batery … amarinina. Tambajotra vaovao miaraka amin'ny tolotra BB tsy amin'ny anarako … amarinina. Entina rahampitso.
Nanozongozona an'i Egypta nandritra ny telo andro nisesy ny fihetsiketsehana , niaraka tamin'ny olona an'arivony nidina an-dalambe nitaky fanavaozana ara-politika sy ara-toekarena, ary koa ny famaranana ny fitondran'i Mubarak nandritra ny 30 taona.
Andro tsy fiasana ny Zoma any Egypta ary nomanina taorian'ny vavaka isaky ny andro Zoma tamin'ny mitataovovonana ny fihetsiketsehana .
Nilaza ny tati-baovao fa nanome torolalana ny mpitari-pivavahana mba hiantso ny olona “hankatò ny mpitondra” ny sampan-draharaham-panjakana tompon'andraikitra.
Namaly i Nourhan hoe :
Raha milaza aminareo ny mpitari-pivavahana ao amin'ny moske mba hihaino ireo mpitondra, lazao azy amin'ny feo mafy hoe: ” ny mampiaka-peo manoloana ny fitondrana jadona no Jihad tsara indrindra.” Ampielezo bebe kokoa ity hafatra ity raha mbola tianao ny miaina.
Nahazo fanehoan-kevitra mifangaro ihany koa ny fanambarana nataon'ny Mpirahalahy Miozolomana tamin'ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny fihetsiketsehana Zoma .
Nitatitra i Amr Ashraf hoe :
Niantso ny mpanara-dia azy ireo hanao fihetsiketsehana aorian'ny vavaka isaky ny Zoma ny Mpirahalahy Miozolomana.
Nisioka ny mpitati-baovao avy ao amin'ny CNN ao Kairo Ben Wedeman hoe :
Mety hampiova zavatra ny fiantsoana nataon'ny Mpirahalahy Miozolomana ho an'ireo mpanohana mba hanatevin-daharana ny hetsi-panoherana manerana ny firenena amin'ny Zoma.
Nanampy i Mohamed Abdo hoe :
Hafatra ho an'ny Mpirahalahy Miozolomana: ho an'ny Egyptiana rehetra ny fihetsiketsehana ny Zoma. Tsy mila tenim-pivavahana izahay fa ny teny filamatra dia hoe “Ny fanonganana ny fitondrana”
Mandritra izany, nanamafy i Wael Abbas fa niakatra ho valo ny isan'ny mpanao fihetsiketsehana maty :
Miisa 8 ankehitriny ny isan'ireo maty teto Egypta
Nokarakaraina taorian'ny antso natao tao amin'ny Facebook ny fihetsiketsehana, avy amin'ny vondrona Khaled Saeed Avokoa Isika. Nomena ny anaran'i Khaled Saeed ny vondrona, tovolahy iray avy any Alexandria novonoin'ny polisy. Niteraka fihetsiketsehana goavana manerana ny firenena ny fahafatesany ny volana Jona, sy ny hatezerana tamin'ny fampijalian'ny polisy ary ny ‘fampiasana ny Lalànan'ny Hamehana hampihorohoroana ny olom-pirenena’. Nankalaza ny faha 29 taonany i Khaled (androany) tamin'o fotoana io raha mbola velona.
Maro, tao amin'ny Twitter, no nanome voninahitra an'i Khaled, anisan'izany i Gayed, izay nanoratra hoe :
Tokony ho 29 taona androany i Khalid saeed . Aoka tsy ho adinointsika izy ary aoka ho fantatr'izao tontolo izao ny antony hikomiantsika !!!
Nokasaina atao manoloana ireo Masoivoho Egyptiana manerana izao tontolo izao ihany koa ny fihetsiketsehana. Niangavy i @ 3arabawy hoe:
Ry vahoaka manerana izao tontolo izao, manentana anareo mba hitandahatra manoloana ny Masoivohon'ny Egypta rahampitso Zoma ho firaisankina.